Owona mlandeli weGPS uphambili kwizigulana ezibandezeleka ukusuka kwi-Dementia | I-Singapore ephezulu ye-GPS ye-GPS Tracker ye-Autism / ye-Autistic yabantwana kunye neDementia yabantu abadala
Ayisiyo yonke inkcaza yolwazi olutsha apho izigulo zengqondo zihlala zihamba zodwa, ngokwenyani, umbutho weAlzheimer wenze uphando kwaye ugqibe kwelokuba ezi-6 kwezi-10 zezigulana zihlala zibhadula. Ezi ayizindaba zilungileyo ngokwenene njengoko ziqhubeka zisigxininisa, esona sizathu sokujonga esweni kunye nokubona okuhle kufuneka kubekwe kubo. Kunyanzelekile ukuba uyazi yonke intshukumo yakho kwaye ungazixela ukuba ziphi na nokuba ziphi na nokuba awukho phakathi kwabo ngokobuqu. Kumaxesha akutsha nje kuye kwakho izinto ezintsha ezenza ukuba kube lula kakhulu oku. Ukusuka kwimihlobiso, imitya yebhanti kunye nee-smartwatches zinokusetyenziselwa ukukhathalela iimfuno ezizodwa zabantu abanethuba eliphezulu kakhulu lokuhamba bodwa.
Uphando lombutho lukwaqinisekisile ukuba abantu bahlala bafunyanwa kumgama oziimayile ezi-1 okanye isiqingatha ukusuka apho bebeqala khona. Ukudiliza kwinqanaba elithile lesifo sengqondo esixhalabisayo kwaye kufuneka kuqatshelwe ngokufanelekileyo kwaye kujongwe, ukujongana neempawu ezithile ezinokuthi ukuba abaguli basenokuthi bucimeke kubaluleke kakhulu. Nanini na xa uqaphela ilungu losapho lwakho ngesidingo esikhethekileyo linyamalala ixesha elide; banokubaleka behla benyuka ivenkile, behamba behamba bebuya okanye bejonge nje belahlekileyo kwimeko-bume. Ke lixesha lokuba wenze ezinye izicwangciso ezinkulu kwimeko kaxakeka enokuthi yenzeke xa ungekho okanye ungabikho.
Ukulandelelwa kwendawo yintsimi ekhula ngokukhawuleza, kukho nethiyori zethamsanqa ekholelwa kwishumi leminyaka elizayo, wonke umntu uza kulandelelwa. Ngoku abazali bayakwazi ukulandelela abantwana babo kwaye bayakwazi ukulandelela abazali babo (nabantu abadala). Neenkonzo zempilo ngoku zisebenzisa i-trackers ze-GPS ukubeka esweni abaguli bazo ngakumbi abo banokuba nengqondo engekhoyo kakhulu.
Olunye udidi lokurekhoda kwezi trackers zezi:
Itekhnoloji yokulandela umkhondo
Ukuba nefowuni kuye kwaba yimfuneko kuye wonke umntu ngoku, ezi fowuni ziqhutywa ngoku kwesi sizukulwana ziifowuni. Iifowuni zinika indlela elula yokulandelela kuba zonke zinokufakwa kwi-GPS ngaphakathi, ezi ziyafezekiseka ngakumbi xa ifowuni ivuliwe. Le nkqubo esisiseko isebenzisa umqondiso wokujikeleza kwefowuni, oku kuyabaqhagamshela kwinqaba ekufutshane. Ngommandla obonakalayo, indawo esikuyo isixhobo sinokubalelwa kwimultilateralism. Iifowuni ngoku zisebenzisa inkqubo yendawo ye-hybrid ukulandelela, inkqubo ye-hybrid ibandakanya ukuwela iGPS kunye nenqaba yesisele ekufutshane edityaniswe kuyo. I-GPS isebenza ngcono kwindawo evulekileyo yasemaphandleni apho iindawo ebezinemephu entle kakhulu, njengoko kwezo zihamba malunga nesixeko kulula ukulandela umkhondo wazo usebenzisa i-WIFI kwiindawo ezahlukeneyo.
Ngoku ekubeni ubuchwephesha bokulandela umkhondo buchaziwe, kukufaka ikhadi lokubhaliswa kwesazisi (SIM) kuphela kwikhadi, isixhobo esinxitywe esuswini okanye nokuba ngumlandeli we-pendant. Ngokubhekisele kwezo zixhobo ngaphandle kwemodyuli yamakhadi e-sim, banokulandelelwa ngokupheleleyo besebenzisa i-satellite okanye i-Bluetooth ekubhanxeni nge-smartphone ekufutshane. Kodwa ukuze ukwazi ukuthumela nokuthumela idatha, sonke isixhobo sifuna uqhagamshelo kwenethiwekhi ukuvumela ukuhambisa idatha. Oku kunokuthathelwa ingqalelo xa ukhetha umkhondo wesigulana esi sifo sengqondo esixhalabisayo.
Uqikelelo lubonise ukuba ngaphezulu kwe-850,000 yabantu abahlala e-UK banesifo sengqondo esixhalabisayo, kodwa sisiqingatha kuphela sabemi abaye bafunyaniswa. Le ikwayimeko efanayo kwihlabathi liphela, eneneni, abanye abaninzi bafumanise kuphela amazwe ambalwa kakhulu. Abantu abachongiweyo kufuneka bacele uncedo kumaziko abo akhethekileyo okanye kubasebenzi abanxulumene nezempilo. Ukujikeleza kwinqanaba lesigaba esingaqhelekanga kwaye kwenzeka kakhulu, ama-40% ezigulana ezinesifo sengqondo esixhalabisayo bahlala bebhadula ngaphandle kwamakhaya abo, ekugqibeleni bayalahleka kwaye ngexesha abanye bafumanise ukuba basweleke.
Amanye amazwe aneenkqubo zokunxibelelana nge-telecare kunye ne-alamu ezinabasebenzi abalungele ukuphendula iifowuni ezivela kwizigulana ezinesifo sengqondo esixhalabisayo. Kwiimeko ezinje ngomrhumo omncinci, banokukhetha ukubanoxanduva lwesigulana kwaye bathwale indawo yabo nendawo akuyo. Oku kwenzeka rhoqo xa aba banikezeli beenkonzo zonxibelelwano ezinokuba ziinkampani zabucala zibeka abakhandeli kwizigulana zabo ukuba baqhubeke nokwazi ukuba ziphi.
Oomakhwekhwetha abenziwe ngendlela ethile
Uninzi lweenkampani zeTekhnoloji zenza ii-trackers ngoku, kwaye ukhathalelo lwempilo luyasebenzisana nabo ukubonelela ngokusetyenziswa ngqo kumgca womsebenzi wabo. Umzekelo wesi sixhobo yi-GPS014D; ngexabiso elimalunga ne-238 yeedola kwaye akukho phakheji lokubhalwayo lwenyanga, nokuba yeyiphi na, yinto eyalandelayo yabantu abadala nabantwana. Unxibe njengayo nayiphi na enye into eqhelekileyo emqaleni. Ine-tracker ye-GPS engaphakathi kwiindlela ezilandelela intshukumo yabantwana abaneemfuno ezizodwa, inekhamera ethi ithumele imiyalezo nge-SOS ecaleni kwemifanekiso ngale ndlela awufumani kuphela isilumkiso kodwa ubona okwenzekileyo. Sisisixhobo esineendlela ezi-2, oko kuthetha ukuba imiyalezo ayinakufumaneka kuyo kuphela kodwa inokuthunyelwa kuyo.
Omnye umzekelo wesi sixhobo yi-OMGGPS10D, iHelp 3G / 4G ye-GPS yokulandela umkhondo. Ayisihambisi manzi ngesandi esingashukumiyo kwaye siwile, sisixhobo esifanelekileyo sabantu abadala abanesifo sengqondo esixhalabisayo. Ingasetyenziselwa ukubek 'esweni-okwenyani yenqanaba labantu abadala. IHelp inokubangela ngokuzenzekelayo i-SOS ukubiza abantu aba-5 ukubonelela ngoncedo kwangoko. Kuya kuba luncedo ngokwenyani ukuba unommi okhulileyo ohlala yedwa kwaye onengxaki yokulahlekelwa yimemori amaxesha ngamaxesha, ikhonkco eliphambili linokuba luncedo ngokugcina iso kubo kwaye liphendule ngokukhawuleza kwiimeko eziphuthumayo ezinokubakho. Ezinye zezinto eziphawuleka engabanjwa ngazo liqhosha lesitshixo:
Isilumkiso xa umsebenzisi ebhadula okanye elahlekile kwindawo engachazwanga
Isilumkiso esikhuselekileyo xa umntu okhulileyo esekhaya labo
Inkqubo ye-GPS inokunika ukuqiniseka ngokukhuselekileyo xa uhambela kwaye yenza indlela elula ukuba ikhumbule umntu ophulukene nememori, yenza konke kube lula kubo bonke ababandakanyekayo ekugqibeleni.
4591 Ubutyebi Bonke Imibukiso ye-26 Namhlanje